Jiruu - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 5:03 7 Adooleessa 20215:03 7 Adooleessa 2021
Torbanitti guyyaa afur qofa hojjachuun ‘baayyee milkaa’aadha’ jedhame
Ayislaanditti torbanitti guyyaa afur qofa guyyaa hojii gochuun yaaliin taasifame ''hedduu akka milka’aa ta’ee''fi hojjattoonni saatii gabaabaaf akka hojjataan taasisuu qorattoonni himan.
...tti maxxanfame 4:18 28 Waxabajjii 20214:18 28 Waxabajjii 2021
Dubartiin al takkaatti dhirsa baay'eetti haa heerumtuun mormii kaase
Qeeqxootni ammoo waan kun Afrikaanummaa miti jedhu. Ijoolleen maatii kana irraa dhalatan akkam tahu gaaffii jedhus kaaseera.
...tti maxxanfame 13:53 23 Waxabajjii 202113:53 23 Waxabajjii 2021
Qorannoon gatii mana kiraa, geejjiba fi nyaata magaalota 209 madaale kun magaalaa Finfinnee sadarkaa 194 irra kaa’eera.
...tti maxxanfame 5:09 8 Waxabajjii 20215:09 8 Waxabajjii 2021
Itoophiyaa, keessattuu magaalaa Finfinneetti, namootni tumaa qaamasaanii irratti tumachuuf jecha hanga birrii kuma 20 baasaa jiraachuu himu. Ofii sababiin fi ergaawwan tumaa maal fa'i?
...tti maxxanfame 9:03 27 Caamsaa 20219:03 27 Caamsaa 2021
Anjeliinaa Jooliifi Biraad Piit ijoolleesaanii waliin akka guddisaniif murtaa'e
Anjeliinaa Jooliifi Biraad Piit intalasaanii Zaaraa kan Itoophiyaarraa guddifachaan fudhatan dabalatee ijoollee isaanii waliin akka guddisan murtaa'e.
...tti maxxanfame 3:45 21 Caamsaa 20213:45 21 Caamsaa 2021
'Haati warraa tokko abbaa warraa hedduuf maaliif hin taane?'
Motummaan Afriikaa Kibbaa seera gaa'iila biyyattii irra deebiin fooyyeessuuf adeemsarra jira. Jalqaba baatii keessatti argamnu kanattis yaadawwan ilaalamu qabu jedhe dhiyyeesseera,
...tti maxxanfame 4:17 6 Caamsaa 20214:17 6 Caamsaa 2021
Tujaarri Ameerikaa Biil Geet waggoota 27 darbaniif Melindaa Geet waliin bultoo ijaarrachuun jiraachaa erga turanii amma adda bahuuf waliigaluu isaanii himaniiru.
...tti maxxanfame 4:36 26 Ebla 20214:36 26 Ebla 2021
Jaalallee tokkoo ol qabaachuun bu'aamoo miidhaa qaba?
Yeroo baayyeen walitti dhufeenya akka waan hubannoo namoota lama qofaa jidduutti umamuutti ilaalla. Haata'u malee, haalli kun dhugaa akka hintaanee himamaa jira. Ofi isin jaalallee tokkoo ol qabaachun bu'aa ykn miidhaa qaba jettu?